सामाजिक बज क्लब: साझेदारी गर्नुहोस् र साझेदारी गर्नुहोस् Martech Zone
सम्मेलन मा भाग लिने को एक महान पक्ष जस्तै सोशल मिडिया मार्केटिंग वर्ल्ड भनेको तपाईले आफ्नो नेटवर्कको सुविधा छोडेर अरु धेरै प्रविष्ट गर्नुभयो। तपाईंको नेटवर्कको आकारको बाबजुद, तपाईं प्रायः समाचार र सूचनाहरू भित्र साझेदारी गर्न सीमित हुनुहुन्छ। यो जस्तो एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जान तपाईंलाई धेरै नयाँ नेटवर्क खोल्छ। हामीले स्यान डिएगोमा एक धेरै मानिसहरू भेट्यौं र हामी मानिस र हामीले पत्ता लगाएका प्रविधिहरूको बारेमा लेख्न जारी राख्छौं।
त्यस्तै एउटा प्रविधि हो सामाजिक बज क्लब। हामी छिटो क्लबमा सामेल भयौं, एउटा सम्बद्ध बन्छौं, र त्यहाँ टीमसँगै काम गर्न थाल्नेछौं। सामाजिक बज क्लब के हो?
एक पटक, दुई साथीहरू र सोशल मिडिया मार्केटि colleagues सहकर्मीहरू उनीहरू कसरी मिलेर काम गर्न र एक अर्कालाई उनीहरूको नयाँ ग्राहकहरूको बारेमा सन्देश फैलाउन मद्दत गर्ने बारेमा कुरा गरिरहेका थिए। एउटाको नयाँ ग्राहक थियो जससँग उनी कार्यरत थिइन् र केही एक्सपोजर लिन आवश्यक पर्‍यो, अर्को एउटा परोपकार जसले अभियान चलाइरहेको थियो र चन्दा बढाउन एक्सपोजर पनि चाहिएको थियो। उनीहरूलाई थाहा थियो कि ग्राहकहरू प्रशंसकहरू र अनुयायीहरूको संख्यासँग सन्तुष्ट छैनन्, यो सबै लगानीको फिर्ता (आरओआई) को बारेमा थियो। ग्राहकहरू उनीहरूको वेबसाइटहरूमा ट्राफिक पठाउँदै उनीहरूलाई ग्राहकहरू वा दातामा रूपान्तरण गर्दै उनीहरूको कार्यहरू देख्न चाहन्थे।
तिनीहरू सहमत भए कि यो चुनौती हो र उनीहरूले सोचे कि उनीहरू सायद त्यस्तै चुनौती भएका एक मात्र व्यक्तिहरू थिएनन्। त्यसोभए, तिनीहरूले भने "के हुन्छ भने?" के हुन्छ यदि एक मार्केटिंग सहयोग नेटवर्क एक मिनी प्रामाणिक, सकारात्मक तरीकाले एक अर्काको व्यवसाय वा ग्राहकहरु को बारे मा शब्द फैलाउन को एक मात्र उद्देश्य संग, सामाजिक मिडिया र अनलाइन मार्केटिंग स्पेस मा पेशेवरहरु सम्मिलित स्थापित गर्न सकिन्छ? यसले ग्राहकको सन्देशको पहुँच पुग्छ र सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा गुणात्मक सामग्रीको साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्दछ। के हुन्छ यदि यो सेट अप गरिएको हो कि सामग्री ग्लोबल वा स्थानीय हुन सक्छ, लक्षित संभावनाको संख्या बढाउँदै - ग्राहकहरूको लागि आरओआई बढाउनुहुन्छ? अझ राम्रो, के यदि सदस्यहरूले आफ्नै सामग्री साझा गर्न सक्दछन् र आफ्नै लागि एक्सपोजर लिन सक्छन्?
यसका लागि विचार सामाजिक बज क्लब जन्मेको। Viola! सहयोग मार्फत सफलता!
त्यसोभए यो बुज नि?
यो सामाजिक बज क्लब समस्या हल गर्दछ र सामाजिक मिडिया प्रेमी व्यवसाय मालिकहरू, सामाजिक मिडिया मार्केटिंग पेशेवरहरू, र अनलाइन मार्केटिंग परामर्शदाताहरूलाई विश्वको पहिलो सहयोगी सामग्री साझा प्रणालीको माध्यमबाट ब्रान्ड बज निर्माणकर्ता हुने अवसर सक्षम गर्दछ। किनभने सेयरिंग परस्पर आधारित छ, हरेक सदस्यले पहिले दिन्छ। यसको मतलब उनीहरूको प्राकृतिक नेटवर्कको साथ प .्क्तिबद्धमा ठूलो ब्रान्डको बारेमा शब्द प्राप्त गर्नु प्रत्येक सदस्यको पहिलो प्राथमिकता हो। अन्य शब्दहरूमा, तपाईंको ग्राहक सामग्री लक्षित दर्शकहरूलाई प्रचार गरिनेछ। एक पटक सदस्यले लक्षित सामग्री साझेदारीबाट पर्याप्त पोइन्ट कमाउँछ, ऊ / उनीले पूलमा उसको / उनको ग्राहक सामग्री योगदान गर्न सक्दछ। यो सुनिश्चित गर्दछ कि सबैले सामग्री साझा गरीरहेका छन् र क्लब तपाईंको आफ्नै ब्रान्डको बारेमा चर्चा गर्नका लागि बज सिर्जना गर्न प्रमुख शक्ति हो वा तपाईंले काम गर्नुहुन्छ।
एकचोटि तपाई लगइन गर्नुभयो भने, तपाईंसँग सामग्री साझेदारी गर्न र पोइन्ट गर्न सामग्रीको सूचि भेट्नु हुन्छ। के म उत्पादनको बारेमा रमाईलो गरिरहेको छु मैले प्रयोग गर्न सक्ने फिल्टरि ofको सीमा र मैले साझेदारी गर्ने सामग्रीको गुणस्तर हो। यो एक स्वचालित इञ्जिन होइन जुन हाम्रो नेटवर्कमा केहि पनि बाहिर फाल्दछ। म पढ्न, क्युरेट गर्न र साझेदारी गर्न सक्दछु जुन मेरो दर्शकहरूको लागि मूल्यवान छ।
टैग: फेसबुकLinkedInपरस्पर व्यवहारबाढ्नुसामाजिक बज क्लबठोकरtwitter
छवि को रूपमा साझा गर्नुहोस्: हाइलाइट गर्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंको पाठ साझा गर्नुहोस्